Umaki: imidiya etholakele | Martech Zone
Umaka: imidiya etholiwe
I-POE isichazamazwi sezindlela ezintathu zokusatshalaliswa kokuqukethwe. Imidiya ekhokhelwayo, engumnikazi kanye nomholo wonke amasu asebenzayo wokwakha igunya lakho nokusabalalisa ukufinyelela kwakho emithonjeni yezokuxhumana. Imidiya Ekhokhelwe, Ekhokhelwe, Ekhokhelwe Yemidiya - ukusetshenziswa kweziteshi zokukhangisa ezikhokhelwayo ukushayela ithrafikhi nomlayezo jikelele womkhiqizo kokuqukethwe kwakho. Isetshenziselwa ukudala ukuqwashisa, ukuqala ezinye izinhlobo zemidiya nokwenza okuqukethwe kwakho kubonwe izethameli ezintsha.
Ukuphakanyiswa kokuqukethwe kuncike kuziteshi eziyinhloko ezi-3 - imidiya ekhokhelwayo, imidiya ephethwe nabezindaba abazuzile. Yize lezi zinhlobo zemidiya zingezintsha, ukuvelela kanye nokusetshenziswa kwemithombo ephethwe neyatholwa kushintshile, inselele abezindaba abakhokhelwa ngokwendabuko. UPamela Bustard, The Media Octopus Paid, Owned and Earned Media Definitions According to The Media Octopus, the Izincazelo yilezi: Paid Media - Noma yini ekhokhelwa ukushayela izimoto
NgoMsombuluko, Juni 30, 2014 NgoLwesine, July 3, 2014 Douglas Karr
Lokhu bekuyi-infographic ethokozisayo ebengifuna ukuyabelana noWolfgang Jaegel. Hhayi ngoba nje inikeza ukuqonda ukuthi yimaphi amasu wokuthengisa wokuqukethwe asatshalaliswa ngabakhangisi be-B2B, kepha kungenxa yegebe engilibonayo kokuqukethwe okusatshalaliswayo ngokuqhathaniswa nokuthi umthelela walawo masu ungaba yini. Ukuze uthandwe, lolu hlu luyimithombo yezokuxhumana, izindatshana ezikwiwebhusayithi yakho, izincwadi zezindaba, amabhulogi, imicimbi yomuntu uqobo, izifundo zamacala, amavidiyo, izindatshana
I-Unified inikeza ubuchwepheshe bokumaketha bamafu nezinhlelo zokusebenza ezenza inhlangano yakho iphathe wonke umjikelezo wokuphila wokumaketha komphakathi, ihambise i-ROI ecacile nenenombolo. Ipulatifomu ye-Unified inikeza uhlelo oluhlanganisiwe lwerekhodi lemikhiqizo, ama-ejensi nabathengisi. Izinzuzo ze-Unified's Social Operating Platform Own futhi ulawule idatha yakho yokumaketha - I-Social Operating Platform ixhuma wonke ama-ejensi, abathengisi nemikhiqizo osebenza nayo ohlelweni lokumaketha lwamafu olulodwa, ikunikeze ukubuka okuphelele kwakho konke